Maamulka degmada Kaxda oo sheegay inay hayaan xog ku saabsan dadkii dilay Abwaan Badal | dayniiile.com
Home WARKII Maamulka degmada Kaxda oo sheegay inay hayaan xog ku saabsan dadkii dilay...
Maamulka degmada Kaxda oo sheegay inay hayaan xog ku saabsan dadkii dilay Abwaan Badal
Guddoomiyaha Maamulka degmada Kaxda ee Gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf Maxamed ayaa sheegay in ay gacanta kusoo dhigi doonaan ciddii dishay Abwaan badal oo xalay lagu dilay Gudaha degmadaas, isla markaana ay ku daba jiraan.
Guddoomiyaha oo ka hadlayay Aaska Meydka Abwaan Badal Jaamac wuxuu sheegay inay hayaan xog ku saabsan dadkii dilay Abwaanka ayna ku daba jiraan sina uga hari doonin ilaa iyo inta ay gacanta uga soo dhigaan.
Guddoomiyaha ma sheegin Magacyada cidda ay ku tuhmayaan dilka Abwaan badal jaamac Xeri & sababta loo dilay, hayeeshee uu sheegay in guryo badan aan lagu harsan doonin ilaa laga soo qabto dadka ka dambeeyay dilka.
Abwaan Badal Jaamac Xersi ayaa kamid ahaa odayaasha Dhaqanka Muqdisho , wuxuuna inta badan ka hadli jiray xaaladaha siyaasadeed ee dalka, sidoo kalena uu ka qeyb geli jiray doodaha Siyaasadeed ee markaas taagan.
Previous articleSheekh Aadan Madoobe oo iska casilay xilkii uu ka yahay xisbiga Himilo Qaran (Sabab?)
Next articleMaamulka Somaliland oo Maanta siideysay qaar kamid ah Wariyeyaashii xirnaa
Guddiga FEIT oo isku khilaafay doorashada kuraasta Gobolka Gedo